कोरोनामा गर्भवतीको स्वास्थ्य - स्वास्थ्य - प्रकाशितः जेष्ठ ४, २०७८ - नारी
कोरोनामा गर्भवतीको स्वास्थ्य
डा. दीपमाला कार्की
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ
हिजोआज कोरोना भाइरसको विभिन्न भेरियन्टको जगजगी छ । यो महामारीले धेरैको ज्यान लिइरहेको छ । अझ पछिल्लो भेरियन्टले सबै उमेर समूहकालाई आफ्नो सिकार बनाउने गरेको छ । त्यसैले सबैजना सचेत, सावधान र सुरक्षित रहनु जरुरी छ । यसमा पनि गर्भवती महिलाले झनै बढी हेरचाह गर्नुपर्छ । ज्ञानेश्वरकी रचना शर्मा गर्भवती भएको चार महिना भयो । उनी यतिबेला आफ्ना चिकित्सकसँग फोनबाटै परामर्श लिइरहेकी छन् । रचनाजस्ता धेरै महिला यतिबेला गर्भवती भएका हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सम्भव भएसम्म फोनबाटै परामर्श लिनु उपयुक्त भएको एभरेस्ट अस्पतालकी स्त्री तथा प्रसूति रोग एवं निःसन्तान विशेषज्ञ डा. दीपमाला कार्की बताउँछिन् ।
गर्भवतीले बाहिर त्यति हिँडडुल गर्नुहुँदैन । घरमै पनि बाहिर काम र अफिस जानेहरूसँग नजिक बस्नुहुँदैन । रुघाखोकी लागेकाहरूबाट टाढै बस्नुपर्छ । डा. दीपमालाका अनुसार गर्भवतीले घरमै बस्दा पनि मास्क लगाउने गरे कोरोना सर्ने सम्भावना ९५ प्रतिशत कम हुन्छ ।
सामान्यतया गर्भवतीले आफ्नो गर्भावस्थाको अवधिमा १० देखि १२ पटकसम्म अनिवार्य जाँच गराउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले अवस्था जटिल भएकाले तीनदेखि चार पटकसम्म मात्र जाँच गराउँदा हुन्छ ।
- आफूले देखाइरहेका चिकित्सकलाई फोनबाटै परामर्श लिनुपर्छ । अल्ट्रासाउन्ड, टिटानस खोप लगाउने समय भएमा कम समयका लागि मात्र अस्पताल जानुपर्छ ।
- अस्पताल जाँदा फेस सिल्ड, डबल मास्क तथा हातमा पन्जा लगाएर जानुपर्छ ।
- गर्भमा रहेको शिशु चले/नचलेको ध्यान दिनुपर्छ ।
- बेलाबेलामा साबुन पानीले हात धुनुका साथै स्यानिटाइजर लगाउनुपर्छ ।
- कतिपय महिलालाई पहिलो तीन महिनामा गाह्रो हुन सक्छ । यतिबेला बान्ता धेरै आएर तल्लो पेट दुखे, पिसाब पोले वा रक्तस्राव भएमा अस्पताल जानुपर्छ ।
- दोस्रो र तेस्रो ट्राइमिस्टरमा रक्तचाप उच्च भए, मधुमेह देखा परे, रक्तस्राव भए र धेरै रिंगटा लागे अस्पताल जानुपर्छ ।
- गर्भावस्थामा प्रोटिनयुक्त खानेकुरा, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो खानेकुरा खानुपर्छ । यतिबेला तरल पदार्थको मात्रा (फ्लुड) बढाउनुपर्छ । शरीरलाई हाइड्रेट बनाइरहनुपर्छ ।
- मौसमी फलफूल खानुपर्छ । दिनमा केही समय आराम गरे गर्भस्थ शिशुको वृद्धिमा फाइदा पुग्छ ।
- साधारण किसिमका योग गर्न सकिन्छ ।
- गर्भवतीले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो बेलामा कोभिड भए होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ । चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि सेवन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा पेटको बच्चामा सर्न नपाए पनि गर्भपतन (मिस क्यारिज) भएको हुनसक्छ ।
- कतिपय कोरोना संक्रमित गर्भवतीले शिशु जन्माएका छन् । हालसम्म यस्ता महिलाले जन्माएका शिशुमा कोरोना देखिएको छैन । यसैगरी, शिशु जन्माइसकेका महिलामा कोरोना देखिए मास्क लगाएर, हात राम्रोसँग सफा गरेपछि मात्र शिशुलाई स्तनपान गराउनुपर्छ । स्तन पम्पले दूध निकालेर बोतलमा राखेर पनि शिशुलाई स्तनपान गराउन सकिन्छ ।
कार्तिक ९, २०७८ - ड्राइफ्रुट्सको स्वास्थ्य रहस्य
आश्विन ४, २०७८ - संस्कृति, भोजन र स्वास्थ्य
श्रावण १०, २०७८ - स्वास्थ्य बीमाले सहज
असार १८, २०७८ - वर्षामा स्वास्थ्य र खानपान
वैशाख २३, २०७८ - कोभिडमा गर्भवतीको स्वास्थ्य सुरक्षा
बालबालिका र दाँत पुस २३, २०७८
जाडोमा बालबालिका हेरचाह पुस २१, २०७८
व्यवस्थित खानपान : स्वस्थ जीवन मंसिर १९, २०७८
फल र तरकारीको महत्व मंसिर ७, २०७८